अदालतको अवहेलना होस् भनेर लेख छापेको होइन-NepalKanoon.com
अदालतको अवहेलना होस् भनेर लेख छापेको होइन
कैलाश सिरोहिया :
प्रजातन्त्रमा कुनै व्यक्तिको अभिव्यक्ति छाप्नु विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु हो। विजय कुमार पाण्डे आफैँमा स्थापित लेखक हो। समसामयिक विषय तथा घटनामा निजको विचार जान्न आम पाठकले चाहेको हुन्छ। कुनै पाठ सामग्री पत्रिकाले छाप्नुको अर्थ सोही विचारलाई स्वीकार गर्नु कदापि होइन। त्यसमा पनि विपक्षीले लेखको एउटा अंशलाई आधार बनाई मुद्दा दिनु भएको छ जुन ठीक होइन। विपक्षीले अदालतलाई विवादमा तान्ने दुषित मनसायले प्रस्तुत अवहेलनाको मुद्दा सम्मानित अदालतमा दिएको देखिन्छ। संविधानले दिएको अधिकार कसैले प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना हुने होइन। लिखित जवाफवालाको स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रति पूर्ण आस्था र सम्मान रहेको कुरा कान्तिपुर पब्लिकेसनबाट विगतमा प्रकाशित पत्र पत्रिकाबाट स्पष्ट हुन्छ।
मिति २०७०।१।२८ मा प्रकाशित उक्त लेखभन्दा धेरै अगाडि देखि लिखित जवाफवालाको पत्रिकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा लेखी आएको छ। मिति २०७०।२।११ मा ‘अचानो होइन, गजुर बनाउन चाहन्छु श्रीमान्’ भन्ने शीर्षकमा विजय कुमारले लेखेको लेख कान्तिपुरमा छापिइसकेको छ। त्यसै गरी विजय कुमारको “प्रश्न सरुवाको होइन सन्देशको हो” भन्ने शिर्षकको लेखको प्रकरण (२)मा कानुन मन्त्री समेतको सहमतिमा न्याय परिषदले न्यायनधीश नियुक्त गर्ने अनि तिनै कानुन मन्त्रीको पार्टीका छुटभैया नेताहरु सुनुवाई समितिमा सिफारिस अस्वीकृतको क्षणिक नाटक गर्ने?ढोङको पनि एउटा हद हुन्छ उल्लेखित लेख कान्तिपुरको मिति २०७१।२।१७को अंकको पृ. ३ मा प्रकाशित छ। यसरी लेखक विजय कुमारले विभिन्न समयमा विभिन्न लेख लेखेका छन्। कुनै एउटा लेखको कुनै एउटा अंशलाई आधार बनाई अदालतको अवहेलना भयो भनी भन्न मिल्दैन। साथै अदालतको अवहेलना होस् भन्ने उद्देश्यले उक्त लेख प्रकाशित गरिएको होइन। अदालतप्रति हाम्रो पूर्ण आस्था र सम्मान छ।
कान्तिपुर पत्रिका प्रकाशनको क्रममा २०५८।२।२४ गते बर्ष ९ अंक १०९ को पेज नं. ६ मा नयाँ कोत पर्वलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने शीर्षकमा बाबुराम भट्टराईले लेखेको लेख प्रकाशन गरिएको थियो। उक्त लेखबाट तत्कालीन सरकारले राज्य विरुद्धका अपराध र सजाय ऐन २०४६ अन्तर्गतको कसूर अपराध गरेको भनी म लिखित जवाफवाला समेतलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा पनि हामीले विचार स्वतन्त्रताको हकको पक्षमा उभिएका थियौँ। तत्कालीन अवस्थामा सरकारको उद्देश्य थुन्ने रहेको भए पनि तत्कालिन विशेष अदालतको आदेशले हामी तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अवसर पाएका थियौँ। त्यसबाट पनि तत्कालीन अवस्थामा माओवादी विचारधाराका मानिसका विचार नागरिकसम्म नपुगोस् भनी सरकारको धारणा थियो। जुन कुरो पछि सरकारले नै मुद्दा फिर्ता लिएबाट हामीले अगाडि सारेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि पत्रिकामा दिएको ठाउँ ठिक थियो भनी प्रमाणित भएको छ। सँगसँगै सरकारको कुदृष्टि पत्रिकामा पर्दा सम्मानित न्यायालयबाट संरक्षण पाएका थियौँ। विगतमा सञ्चार क्षेत्र माथि सरकारबाट अवरोध हुँदा न्यायपालिकाले संरक्षण गरी आएको कुराको साक्षी हामी आफँै छौँ। साथै आफैँ पनि संरक्षित भएका थियौँ। यस अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अवहेलना वा माननीय न्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने काम कम्पनी र मबाट हुनै सक्दैन। साथै भविष्यमा पनि त्यस्तो हुने छैन।
(कान्तिपुरका प्रकाशक कैलाश सिरोहियाले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार बुझाएको लिखित जवाफको सम्पादित अंश)